Himalaya Dainik » लकडाउनबीना नै कसरी जापानले कोरोना महामारीलाई जित्यो ?
बीबीसी, कोरोना भाइरस संक्रमणको घटना संसारभरि बढ्दै जाँदा अधिकांश देशहरूले यसको सामना गर्न लकडाउन र थप परीक्षणमा जोड दिए। यद्यपि धेरै देशहरूमा संक्रमणका घटनाहरू कम भइरहेको देखिँदैन तथापी कोरोना संक्रमणका घटनाहरु बढ्दो रुपमा रहेका देखिन्छन। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमीतको कुल संख्या १,५६७ छन् र अहिले सम्म करिब ८ जना मानिस मरेका छन्। भने २२० जना निको भएर घर फर्किएका छन। नेपालमा चैत्र १३ गतेदेखि लकडाउन जारी छ। तर लकडाउन अगाडि बढ्दै जाँदा, संक्रमणका घटनाहरू केहि कम भएपनि परिक्षणको दायार बढेसंगै संक्रमितको संख्या बढ्ने क्रम जारी छ।
संक्रमणको घटना बढ्दै जाँदा धेरै मानिसहरूले सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन, संक्रमण बढ्दै गर्दा लकडाउन मुक्ति छुट दिइन्छ?अमेरिका, रसिया, बेलायत, चीन र दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरूले पनि कोरोना संक्रमणको सामना गर्न लकडाउन लागू गरे। यद्यपि सबै आलोचना र प्रश्नहरूको बाबजुद जापानले पूर्ण लकडाउन कार्यान्वयन गरियन।यहाँ आपतकालिन लागू गरिएको थियो, र यस समयमा मानिसहरूलाई घर र कामबाट बाहिर जान अनुमति दिइयो। जापानको सरकारले विश्वका बाँकी ठाउँहरू जस्तै सम्पूर्ण लकडाउन लागू गर्ने कानुनी अधिकार छैन।
यद्यपि स्थानीय गभर्नरले व्यवसाय मालिक र मानिसहरूलाई घरमै बस्न अपील गर्न सक्दछन्। तर यसलाई अनुसरण नगर्दा पनि कुनै सजाय वा दण्डको प्रावधान छैन। जहाँसम्म, यदि हामी तथ्याकंमा ध्यान दियौं भने, यो पत्ता लाग्यो कि संक्रमणको प्रभावको कारण मानिसहरु घरबाहिर निक्लनेको संख्यामा केही कम भएको थियो।विश्व स्वास्थ्य संगठन र सबै देशहरूले संक्रमणबाट बच्न बढी र अधिक परीक्षणमा जोड दिए, जापानले मात्रै उनीहरूको परीक्षण गर्‍यो जसमा गम्भीर लक्षणहरू देखा परेको थियो। जापानले कुल जनसंख्याको ०.२ प्रतिशत मात्र परीक्षण गर्‍यो।जापानमा धेरै कम परीक्षणको बारेमा पनि प्रश्न उठाइएको छ,
तर प्रधानमन्त्री शिन्जो आबे भन्छन् कि सम्पर्क ट्रेस गर्ने उनको रणनीति अधिकांश क्षेत्रमा प्रभावकारी साबित भयो, जसले गर्दा उनी संक्रमण फैलिन रोक्न सफल भए। जापानलाई डायमंड राजकुमारी क्रूज शिपको प्रसारमा काम गर्नमा ढिलाइ भएकोमा पनि आलोचना गरिएको थियो जुन विश्वमा संक्रमण सुरु भएको थियो। धेरै विज्ञहरूले जापानको स्वास्थ्य प्रणालीको असफलताको पूर्वानुमान गरेका थिए र अनुमान गरिएको थियो कि लाखौं मानिस यहाँ संक्रमण बाट मर्न सक्दछन्। तर सरकारले आफ्नो रणनीतिको एक हिस्साको रूपमा काम गर्‍यो र कोरोनाबाट विजयको घोषणा गर्‍यो।
प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले डेढ महिनासम्म चलेको आपतकालको अन्त्यको घोषणा गरेका छन्। आपतकालको अन्त्यको घोषणामा प्रधानमन्त्री आबेले भने, “हामीले जापानको आफ्नै विशेष विधि अपनाएर यस संक्रमणको लहरलाई पूर्ण रूपमा हराइसकेका छौं, यो धेरै प्रभावकारी साबित भएको छ।” त्यसोभए अब प्रश्न खडा हुन्छ कि जापान मोडलमा के हो कि उसले कोरोना संक्रमण यति छिटो जितेको छ। र यसले महामारी व्यापक रूपमा फैलन अनुमति दिँदैन, जबकि अमेरिका वा रसिया जस्ता देशहरूको अवस्था बिग्रिएको थियो।
स्वास्थ्य क्रममा जापान दोस्रो स्थानमा छ।जापानमा आफ्नो जनसंख्याको कम्तिमा २४ प्रतिशतको उमेर ६५ वर्ष माथि छ। त्यो, यो उमेर समूह हो जुन धेरै धेरै कोभिड-१९ को संक्रमणको जोखिममा छ। जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयका तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म संक्रमित १६७१६ घटनाहरू भएको छ र ८८८ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। यद्यपि यहाँ कुनै ठूलो मात्रामा परीक्षण गरिएको थिएन, स्वास्थ्य सेवाहरू यति राम्रो र सस्तो छन् कि यदि त्यहाँ कुनै समस्या छ भने, मानिसहरूले उनीहरूलाई डाक्टरलाई देखाउँछन् र कुनै कठिनाईको लागि पर्खदैनन्।
एसिया टाइम्सको रिपोर्ट अनुसार जापानमा निमोनियाका कारण हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा मानिस मारिएका छन्। २०१४ सालदेखि निमोनिया खोपको परिचय ६५ बर्ष वा माथि उमेरका लागि निःशुल्क सुरु गरिएको थियो तर यो एक प्रकारको निमोनियाको लागि थियो ।यद्यपि यो स्थापना गर्न आवश्यक थिएन। यस खोप पछि, सन २०१७ देखि निमोनियाका कारण हुने मृत्युमा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ। २०१८ मा निमोनिया जापानमा हुने सामान्य कारणहरूको सूचीमा तेस्रो स्थानबाट पाँचौं स्थानमा खस्कियो। नयाँ औषधि र परीक्षण सुविधाहरू यसका लागि विचार गरिदैछन्।
कोरोना संक्रमणका लक्षणहरूमा निमोनिया पर्छ र बिरामीलाई सास फेर्न सक्छ। जापान यससँग व्यवहार गर्ने स्थितिमा छ यदि त्यहाँ न्यूमोनियाको लागि राम्रो उपचार छ।टोकियोका डाक्टर मीका वाशीयो भन्छन,“सीटी स्क्यानले निमोनियाको शुरुवाती अवस्था पत्ता लगाउन सक्छ र तुरुन्तै उपचार सुरु गर्दछ।”यसै कारणले जापानमा गम्भीर घटनाहरू घटे। समुदाय संक्रमण पत्ता लगाउन र रोकथाम गरेर भाइरसको प्रसार सीमित गर्न कार्य गरिएको थियो। स्वास्थ्य सचेत जापानी संस्कृति को कारण, कोभिड-१९ को प्रभाव कम गर्न सहयोग पुगेको थियो।
“धेरै मानिसहरू पहिले मास्क लगाउँथे, खास गरी जाडोमा। यो भाइरस त्यति फैलिएको थिएन,”वाशियो भन्छन्। जापानका करीव ६० प्रतिशत व्यक्तिहरू वार्षिक रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दछन् र स्वस्थ हुने प्रयास गर्दछन्। यसको मतलब यो होइन कि अगाडि कुनै चुनौतीहरू छैनन्। कोविड-१९ संक्रमण भएका धेरै बिरामीहरू अस्पतालमा छन, तर जापानले अस्पतालको ओछ्यानहरू बढी गम्भीर अवस्थाका लागि सुरक्षित गर्दैछ। सामाजिक दूरी जापानको जीवनको एक हिस्सा हो। अमेरिका, फ्रान्स र इटाली जस्ता व्यक्ति यहाँ भेट्न वा स्वागत गर्न धेरै नजिक आउँदैनन्।
यहाँका मानिसहरु स्वास्थ्य र सरसफाइका बारे धेरै सचेत छन्, मास्क लगाउनु उनिहरुको सामान्य जीवनको अंश हो। विशेष गरी जाडो को अवसर मा। यसको कारणले गर्दा, उनीहरूलाई सामाजिक दूरी, मास्क लगाउने र अन्य नियमहरू पालना गर्न गाह्रो थिएन
।यो हीरा राजकुमारी क्रूज शिपमा कोरोना संक्रमणको सामना गर्ने बेलामा मात्र जापानले महामारीको भयानक अवस्थालाई बुझ्यो र यताबाट कारबाही सुरु गर्यो। बिजनेस इनसाइडरको एक रिपोर्टले दाबी गर्यो कि जापानमा सम्पर्क ट्रेसिङ नेटवर्क जनवरीदेखि नै सक्रिय रहेको थियो र यहाँका अनुसन्धानकर्ताहरूले पनि एसियामा भाइरसको प्रकोप युरोपको भन्दा कम हुने पूर्वानुमान गरेका थिए।
स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूको हस्तक्षेप र जनताको संयुक्त प्रयासको कारण यहाँ स्थिति थोरै फरक थियो। तालाबन्दी कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा जापानले जनतालाई पर्याप्त भेन्टिलेसन नभएको ठाउँमा जम्मा हुन अपील गर्यो, अर्थात्, कुनै पनि सार्वजनिक ठाउँमा ठूलो संख्यामा संग्रह नबनाउन साना ठाउँहरूमा ठूलो संख्यामा मानिसहरू जम्मा नगर्न अपील गरियो। त्यहाँ हुन र एक अर्कोको नजिक हुनबाट जोगिन पनि अपील गरिएको थियो। सोमबार जापानका प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा भने,“अबदेखि हामीले नयाँ जीवनशैली अपनाउनुपर्नेछ। हामीले आफ्नो सोचाइ बदल्नु पर्छ।”यद्यपि धेरै विज्ञहरूले जापानका प्रयासलाई प्रश्न गरेका छन्।
विज्ञहरू भन्छन कि ती प्रयासहरू त्यति प्रभावकारी छैनन् किनकि विश्वको बाँकी भागमा पनि मानिसहरूले यस्ता चीजहरू अपनाएका छन्, तर त्यहाँ कुनै केस भएको थिएन। यस्तो अवस्थामा जापानले पनि तथ्यांक लुकाउने आरोपहरूको सामना गरिरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख डा. ट्रेड्रस गेब्रिजले गत सोमबार कोरोना संक्रमणसँग सामना गर्न जापानले गरेको प्रयासलाई “सफल”भने। जिनेभामा एक प्रेस सम्मेलनमा डब्ल्यूएचओ प्रमुखले हालका समयमा जापानका प्रयासहरूको प्रशंसा गरे जसको कारण संक्रमणका घटनाहरू बढेको छैन। यद्यपि उनले जापानका जनतालाई सामाजिक दूरी अपनाउन र अन्य सामान्य सावधानी अपनाउन अपील गरेका छन्।सिधाकुरा
प्रकाशित मिति १९ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०५:२२